ROBIMANANA ORLANDO - KANDIDA LAHARANA 35
VONONA HANALA NY VESATRA MIANJADY AMIN’NY VAHOAKA MALAGASY
Atoa Robimanana Orlando no laharana faha-35 amin’ireo kandidà miisa 36 nilatsaka hofidiana ho Filoham-pirenena ny volana Novambra 2018 ho avy izao. Tsy tongatonga foana io laharana misy azy io fa manana ny dikany lehibe tokoa, hoy Robimanana Orlando, satria dia miisa 35 ny fahagagana voasoratra ao anatin’ny Testamenta Vaovao. Araka izany, dia ity kandidà mitondra ny laharana faha-35 ity no hitondra fiovana lehibe eto amin’ny firenena ary hitady sy hikatsaka ihany koa izay mety ho vahaolana rehetra amin’ireo vesatra mianjady amin’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao.
Fa iza moa ny kandidà Robimanana Orlando?
Izy no Filoha mpanorina ny antoko “Madagasikara Vina sy Fanantenana”. Olona tsotra, matahotra an’Andriamanitra ary tena tia sy miaro ny vahoaka. Mbola tena ao anatin’ny fahatanorany sy ny tanjany tokoa I Robimanana Orlando satria vao 48 taona monja izy amin’izao fotoana izao. Manambady ny tenany ary manan-janaka roa.
Maro ny diplaoma ananany sy ireo andraikitra ambony efa notanany na teto an-tanindrazana izany na tany ivelany, raha tsy hitanisa afa-tsy vitsivitsy fotsiny ihany, anisan'ireny :
- Diplaoma « Droit Public et Sciences Politiques », tao amin’ny Oniversite Antananarivo
- Diplaoma maha « Inspecteur du Trésor », tao amin’ny IMATEP
- Ny « audit, évaluation et contrôle de la dépense publique », tany amin’ny ENA France.
Raha atambatra dia 21 taona niasana sy nitantanana andraikitra ambony i Robimanana Orlando : 10 taona no naha-Talen’ny Brigade d’Inspection azy, 6 taona no naha-Tale Jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana ny tenany, 5 taona no nitazonany ny andraikitra maha Expert du Fonds Monétaire International ary 4 taona no niasany tamin’ny Cours Pénal International.
Marihina fa izy no nanorina ny gazety boky « Tahiry », nivoaka isam-bolana teo anivon’ny Trésor. Anisan’ny nampiavaka ity gazety boky ity ny fanaovana fanadihadina ary indrindra ny fampisongadinana ny fisian’ny fitantanana tsy madio, tsy mahomby ary tsy mangarahara. Araka izany, dia ny tenany no nanolotra sosokevitra mba hoentina iadiana amin’izany. Ny kandidà Robimanana Orlando ihany koa no nanoratra ny boky “Madagasikara Vina sy Fanantenana,”, izay nivoaka ny taona 2017. Maro ireo vina ho entina mampandroso an’i Madagasikara voasoratra ao anatin’izany boky izany. Marihina anefa fa dia tsy nahamenatra an’ireo kandidà sasantsany mpifaninana aminy ny naka sy nakatahaka ireo vina voasaotra ao anatin’io boky io.
Inona ary ny antony nadrisika azy hilatsaka ho fidiana
Vavolombelona nahita ny fitantanana ny volam-bahoka sy ny harem-pirenena ny tenany, araka ireo asa sy andraikitra maro efa nosahaniny ireo. Nijoro hatrany izy, nanentana sy nandresy lahatra mba hialana amin’ireo toetra ratsy fanaon’ny mpitondra sy ny mpitantanana sasantsasany. Niafara tamin’ny fanesorana azy teo amin’ny toerany anefa izany fijoroany sy fitandroany ny marina izany. Niteraka savorovoro moa io fialany io.
Resy lahatra ary ny kandidà Robimanana Orlando fa mila manova toe-tsaina sy fomba fitantanana ary rafitra fitantanana ny fanjakana. Araka ny heviny dia mbola azo atao tsara ny mifehy ny harem-pirenena eto Madagasikara ary mampisitraka azy ireo ny vahoaka maro an’isa. Mbola resy lahatra ihany koa ny tenany fa tokony ho tohizana hatrany ny fijoroana hanohitra ny tsy rariny ary ampiana fandraisana andraikitra izany. Ireo antony ireo no anisan’ny nandrisika azy hilatsaka ho fidiana ho Filoham-pirenena mba ahafahany mitondra ny anjara biriky ho fampandrosoana an’i Madagasikara.
Azo sokajiana 7 ireo vina ho entin’ny kandidà Robimanana Orlando hampandrosoana an’i Madagasikara.
Famaritana na fifehezana ny andraikitry ny Fanjakana sy fanomezana andraikitra feno ny vondrom-bahoaka fototra mba ahafahany mifehy ny fampandrosoana ary koa mba ho fiahiana ny vahoaka.
Fanadiovana ny fitantanam-bolam-bahoaka ary fanomezana ny hoenti-manana ampy hamatsiana ny drafim-pampandrosoana ifotony.
Fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana sy fifehezana ny famokarana eo amin’ireo sehatra 5 andrin’ny fiharian-karena sy fampandrosoana dia ny angovo, ny ranomasina, ny harena ankibon’ny tany, ny fambolena sy fiompiana sy fanodinana vokatra ary ny sehatry ny fizahantany.
Fanavaozana ny fototra ijoroan’ny fanabeazana sy fampianarana ary ny fikarohana eto Madagasikara.
Fanatsarana maharitra ny farimpiainan’ny mponina toy ny fanomezana rano fisotro madio, ny fahasalamana ary ny fiahiana ireo zokiolona.
Fanavaozana ny rafitra fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fitsarana.
Fanomezan-danja sy famporisihnina ny tanora eo amin’ny sehatry ny :
Fanabezana sy fampianarana ary fanofanana ara asa.
Fantatra fa tany anisan’ny manan-karena i Madagasikara kanefa dia any amin’ny laharana faha-5 any amin’ny farany no laharana misy azy amin’ireo firenena rehetra maneran-tany. Ny 70%-n’ny Malagasy no tsy misakafo ara-dalàna, ny 87% no tsy manana rano fisotro madio ary ny 80% kosa dia mbola miaina anatin’ny haizina satria tsy mba manana jiro mandeha amin’ny herinaratra.
Efa an-taonany maro no nanaovany fandinihana ka tonga izao ny fotoana hanehoan-dRobimanana Orlando, fa mila azy ny firenena, hanarina sy hanala an’i Madagasikara ao anatin’izao fahantrana lalina misy azy izao.
NIEREN-DOZA NY KANDIDA ROBIMANANA ORLANDO SY NY MPIARA-DIA TAMINY
Tamin’ny fahatairana lehibe tokoa no nandrenesan’ny rehetra ny lozam-piarakodia nahazo ny kandidà laharana 35, Robimanana Orlando, ny Alahady 07 Oktobra 2018 teo. Amin’ny maha olona matahotra an’Andriamanitra azy anefa dia nanehoan’Andriamanitra ny voninahiny sy ny heriny Robimanana Orlando ka tsy maty fo aman’aina tamin’io loza nahazo azy sy ireo mpiara-dia taminy io.
Raha tsiahivina fohy ny fitrangan’ity loza nahazo azy ireo ity dia fantatra fa nifandona tamin’ny fiarabe iray ny fiara 4X4 nitondra azy ireo ny Alahady teo io tokony ho tamin’ny 7 ora 45 mn. Teo anelanelan’Antalaha sy Sambava no toerana nisehoan’ny loza. Marihina fa fihaonana tamin’ireo mpandraharaha ara-toekarena tany Antalaha no fotodian’izy ireo tamin’izany, ary teny an-dalana hiverina any Sambava izy ireo izao niharan-doza izao.
Na dia mafy aza ny fifandonana teo amin’ny roa tonta, satria dia potika tanteraka ny lohan’ilay fiara 4X4 nitondra ny kandidà Robimanana Orlando, dia nieren-doza ny tenany ka mbola afaka hanohy ny fampielezan-kevitra sy ny fifaninanana ho filoham-pirenena ny volana Novambra ho avy izao izy.
Toa mampametram-panontaniana ihany ity loza tampoka nahazo ny kandidà Robimanana Orlando ity. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso mantsy dia toa zavatra niniana natao izy ity, angamba tetika hoentina hanilihana an-dRobimanana Orlando. Ny marina tsy mba maty, ka mbola nomen’Andriamanitra tombon’andro ny tenany mba ahafahany mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanarenana an’i Madagasikara sy amin’ny fanalana an’i Madagasikara ao anatin’izao fahantrana lalina izao.
Mirary fahasitranana haingana ho azy sy ireo izay naratra tamin’ny mpiara dia taminy ny ekipan’ny Vohizo.